Oko Ukwenza Ngomthi Wokuqhawula: iGummosis
Izilwanyana kunye Nendalo I-Arboriculture
Indlela Yokuphatha Umthi Wokuqhawula
Ukugqithisa ibhakede kwizityalo eziqhelekileyo kukhokelela ekukhathazeni xa kubonwa ngabavelisi bomthi kunye nabanini bomthi wendawo. I-Gum kunye nokutshiza ukutywala kumthi womthi okanye izitho ziqhelekileyo kwimithi kwi-genus Prunus equka iiperesi kunye ne-cherries kodwa inokwenzeka kwiintlobo ezininzi. Oku kuphuma komthamo kungabangelwa zizifo zombini ze- biotic kunye nokulimala kwe-abiotic.
Inkcazelo enye yencwadi yegama elithi gummosis "ngumkhiqizo omkhulu kunye nokugqithwa kwegum ngumthi okhubazekile okanye owonakele, ngokukodwa njengempawu yesifo semithi yezithelo." Kodwa ingaba uphawu lokuqala lweengxaki, kungekhona kwintsimi kuphela kodwa kwimimandla yemigangatho yemimandla e-yards, ipaki kunye namahlathi.
I-Gummosis emthini akuyikuphela kwehlabathi. Naluphina ukuphaphaza okanye ukugquma kwesohlwayo emthini, nangona kungengowesiqhelo, akusayi kuba yingozi nakunomthi okanye isityalo esineziqhamo kwaye bahlala besinda kwiimeko ezininzi zokugawula igazi. Kwakhona kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba kukho ezininzi izizathu zokusasa i-free-flow emithini ukuze zibandakanye iinambuzane, izigulana, ukulimala kweentsimbi kunye nezifo ezahlukahlukeneyo. Ukulawula le mijelo ewonakalisayo iya kulawula i-deposit gum kunye nokuhamba kwe-sap kodwa kaninzi akukho nonyango.
Izizathu Zokubhikisha Imithi okanye iGummosis
I-Gum exuding from cherry, peaches, kunye ne- sweetgum ixhaphake kakhulu ngoko ke gcina iso lokuphuma kwegazi kulezi zityalo. I-Gummosis ayiyiyo into eyenza i-pathogen ngokwayo kodwa iyimpendulo yokunyamezela kwendalo kwimeko yokulimala kwe-pathogenic, ukulimala kwezilwanyana kunye nokulimala okwenzakala apho uza kubona ukutywala okugqithiseleyo.
Izifo ezithathelwanayo nezifo ezithintekayo ezibangelwa ukugafa kwegazi zingabangela ingxaki kwiintsimi zeziqhamo.
Ngokukodwa, i- ytospora canker okanye i-canker engapheli yimbangela ebalulekileyo yefungal yokuphaphaka kwiimithi eziqingqiweyo zamatshe ezifana ne-apricot, i-cherry, i-peach, ne-plum.
Le ntsholongwane iyahlukana nokulimala kwezilwanyana kunye nokulimala okwenziwa ngumatshini ngenxa yokuba i-sawdust okanye iinqaba zebhakede azixubeki kwi-sap, njengoko kuya kuba ngumonakalo okanye inkunkuma.
I-cytospora canker yaziwa nangokuthi i-perennial canker. Akubalulekanga ukuba ufumene isizathu (s) esibandakanyekayo kodwa kubaluleke kakhulu ukuhlukanisa phakathi kwe-insecticide infestation, ukulimala komatshini, kunye nezifo ezithathelanayo zokuxilongwa.
Indlela yokukhusela nokuThatha ukuBholwa kwesihlahla kunye nokuGumla kweGum
Kukho iinkqubo zokulawulwa kwezinambuzane ongazithobelayo eziya kunciphisa umngcipheko we-gummosis. Nceda uqaphele xa usebenzisa izixhobo zelinen kunye negadi ukuze ugweme ukulimala komzimba onokuthi ungabamba ii-fungal spores; ukukhusela ubungozi obusika ebusika emthini wakho ngokutshala iindidi ezinobungozi ngaphakathi kwendawo yayo enzima kwaye ngaphandle kweendlela ezikhuselekile zomoya; ukugcina impilo yomthi ukuphazamisa iintsholongwane ezibuthayo kwaye zihluthe kwaye zilahle izitho ngexesha lokuphela kwebusika.
Kubalulekile : zama ukufumanisa ukuba umthi ulimele kancinci, uhlaselwe yizinambuzane okanye ukhulelwe zizifo. Ngokuqhelekileyo, ukulimala kwamagqabi kunye nezinambuzane kuya kushiya i-sapwood okanye i-sawdust.
Phatha iimbangela endandizikhankanyileyo kangangoko unako xa ukwandisa imimiselo "emnandi" yemithi yempilo efanelekileyo. Ukwanda kwamandla emthi kuyimfuneko kwaye kuya kuba nemiphumo emihle. Olunye unyango olucebisa ngokukhawuleza lusetyenziso lwe-garden lime (amanani amaninzi) phantsi komgca we-drip-line ukuba isayithi lakho linomlinganiselo ophantsi ukuya kwi-moderation.
Ukuphakamisa umhlaba Ph ukuya ku-6.5 unokukwenza imimangaliso yempilo yomthi .
Imithi yoMhlaba kwiNgcini yakho yoLondolozo kunye noManzi wamanzi
Ukuthengwa nokusebenzisa i-Pole Chainsaw Pruner
Isikhokelo sokutyala komthi
Indlela Yokuthengisa Imithi Yomthi
Ubusika Imithi Yakho
Yenza i-Botanical Tree Cookie Cross-Sections
Ubaluleka be-Photosynthesis kwiMithi
Abaphathi be-Cup ye-Ryder: Uluhlu lwabo bonke abaye bakhonza
Abasetyhini kunye neMfazwe Yehlabathi II: Abafazi kuRhulumente
INKUMKANI - Igama elithi & Origin
Isingeniso kwiNcwadi kaMateyu
Ziyintoni Iintshontsho Zemakhadi?
IiNdlu zeeNdlu kunye neeNkxaso
Umlinganiselo wokukhulelwa kwabafundi kunye neNtshuzelo yokuKhulelwa kweNtsha eMelika
Biography kaHarry Houdini
Yintoni i-Suburban Sprawl?
I-Pusan ​​Perimeter kunye nokuhlasela kwe-Incheon